China Cylindrical Roller Bearing Manufacturer uye Supplier |Lixin
Iyo cylindrical roller bearing imhando yeakapatsanurwa kubereka, nyore kuisa uye disassemble.Aya mabearings ane high bearing capacity.Iyo nyowani yekugadzira dhizaini yeflange uye yekupedzisira chiso che roller haingonatsiridza iyo axial kutakura kugona, asi zvakare inovandudza iyo lubrication mamiriro enzvimbo yekubatana pakati peiyo roller yekupedzisira kumeso uye flange, uye inovandudza mashandiro ebasa rebere.
Iyo cylindrical roller bearing imhando yeakapatsanurwa kubereka, nyore kuisa uye disassemble.Aya mabearings ane high bearing capacity.Iyo nyowani yekugadzira dhizaini yeflange uye yekupedzisira chiso che roller haingonatsiridza iyo axial kutakura kugona, asiwo inovandudza lubrication mamiriro enzvimbo yekusangana pakati peiyo roller yekupedzisira kumeso uye flange, uye inovandudza mashandiro ebasa rekutakura.Inogona kumirisana nemitoro yakakura yeradial uye inokodzera kumhanyisa-kumhanya, senge mahombe uye epakati-saizi mota, locomotive uye rolling stock, muchina maturusi spindles, mukati memoto injini, jenareta, zvinoderedza, zvigayo, uye kusimudza nekufambisa michina.
1. Upenyu Hurefu
Yakagamuchirwa yekutanga chisimbiso dhizaini kudzivirira kusvibiswa uye kubuda kwegirisi.
Iine girisi yakakosha yematembiricha akakura uye hupenyu hurefu.
2. Smooth uye Chinyararire Operation
Iyo chaiyo nhanho yezvikamu zvedu zvekubereka yakakwidziridzwa kuti ive nechokwadi chekushanda kwakanaka uye kwakanyarara.
3. Low Torque
Yezasi inotenderera torque ne
Pakutanga, tichava nekutaurirana nevatengi vedu pane zvavanoda, ipapo mainjiniya edu anozogadzira mhinduro yakakwana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi uye mamiriro.
Kumhanya zvinoenderana neISO 9001 mhando sisitimu, iyo yepamusoro dhizaini midziyo, yakaomesesa yekugadzirisa tekinoroji, yakasimba yemhando manejimendi system, vashandi vane hunyanzvi uye inovandudza tekinoroji timu, ita mabearings edu mukuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemhando & kusimudzira tekinoroji.
Zvinoenderana neiyo ISO zviyero, isu tine nyanzvi yeQ / C vashandi, chaiyo yekuyedza zviridzwa uye yemukati yekuongorora system, hutongi hwemhando hunoitwa mumaitiro ese kubva pakugashira zvinhu kusvika pakurongedzerwa kwezvigadzirwa kuti tive nechokwadi chemhando yedu.
Yakamisikidzwa kurongedza kunze kwenyika kurongedza uye nharaunda-yakachengetedzwa kurongedza zvinhu zvinoshandiswa kune yedu kutakura, iyo tsika mabhokisi, mavara, barcode nezvimwe zvinogona kupihwa zvinoenderana nechikumbiro chemutengi wedu.
Kazhinji, mabearings edu anozotumirwa kune vatengi nekufambisa kwegungwa nekuda kwehuremu hwayo, kutakura kwendege, kutaura kunowanikwawo kana vatengi vedu vachida.
Zvakapfuura: Tsono Roller Bearing
Zvinotevera: Aluminium Bhora
Cylindrical Roller Inotakura 20x47x14
Cylindrical Roller Inotakura 25x52x15
Cylindrical Roller Inotakura 30x62x16
Kaviri Row Cylindrical Roller Bearing
Pure Solid Copper Bhora, H62 Bhora rendarira, Bhora rendarira, H65 Bhora rendarira, Diki Mhangura Mabhora, Bhora resimbi,